Semalt कसरी नराम्रो पूनरावलोकनसँग कारोबार गर्ने निर्देशनहरू दिन्छ
एक वा दुई खराब समीक्षाहरू प्राप्त गर्नु तपाईंको व्यवसायको लागि डोजलको हिज्जे हुनु हुँदैन। जहाँसम्म, तपाईं यसलाई कसरी संभालनुहुन्छ यसले ठूलो फरक पार्न सक्दछ - यसलाई लापरवाहीपूर्वक गर्नुहोस्, र यो समस्यामा परिणत हुन्छ जुन टाढा जान सक्दैन। यदि तपाईं एक ठूलो उद्यम चलाइ रहनु भएको छ भने, तब स्वाभाविक रूपले तपाईं केहि खराब समीक्षाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, र तिनीहरूले धेरै नोक्सान गर्ने छैनन् तर धिक्कार यदि तपाईं सानो उद्यम छ भने। यसले तपाईंको प्रतिष्ठालाई बिगार्न सक्छ।
एक दर्जन वा सोही समीक्षा वेबसाइटहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको दुई सेन्ट दिन अनुमति दिँदै, यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि केही खराब समीक्षाहरूले गुगलको पहिलो पृष्ठमा उनीहरूको मार्ग फेला पारे। येल्प, ट्रिपअड्वाइजर, फोरस्क्वायर, र अन्य समीक्षा साइटहरूमा तपाईंको व्यवसायको बारेमा के भनिएको छ भनेर पत्ता लगाउन कुनै पनि उल्लेखहरूमा सूचनाहरू प्राप्त गर्न गुगल अलर्ट प्रयोग गर्दछ। सामाजिक उल्लेखले तपाइँलाई सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको सन्दर्भमा लूपमा पनि राख्छ। यो गुगल अलर्ट जस्तै काम गर्दछ।
यहाँ छ उपयोगी सहयोगी सुझावहरू छन्, ओलिभर कि by्ग द्वारा Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, खराब ग्राहक समीक्षासँग व्यवहार गर्ने बारे।
१. समस्यालाई वेवास्ता नगर्नुहोस्
जबकि एकल नराम्रो समीक्षा चिन्ताको कारण हुनु हुँदैन, यदि खराब समीक्षाहरू तपाईंको पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नभएको खण्डमा राख्छन्, यो एक धेरै खराब अभ्यास हो। सम्भावित ग्राहकहरु तपाइँको प्रोफाइल को माध्यम बाट जा मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर आश्चर्यचकित छ यदि तपाइँसँग साँच्चिकै उनीहरुको चासो हृदय छ वा यदि तपाइँ पैसा पछि मात्र हुनुहुन्छ। यो राम्रो छ यदि तिनीहरूले कथाको दुबै पक्षहरू सुन्न सक्छन् - असन्तुष्ट ग्राहक र तपाईंको। अवश्य पनि, त्यहाँ अपवादात्मक अवलोकनहरू छन् जुन तपाईले समीक्षालाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ जब एक व्यक्तिले नराम्रो समीक्षा पोस्ट गरिरहन्छ वा जब यो स्पष्ट छ कि समीक्षा लिने व्यक्तिको दिमाग राम्रो स्थितिमा छैन।
२. एउटा समाधान प्रस्ताव गर्नुहोस्
सामान्य माफ गर्नुहोस् कहिलेकाँही परिस्थितिको समाधान गर्न सकिन्छ। सबै एक समान, तपाईंले वास्तवमा उही कुराको दोहोर्याउनबाट बच्न केही गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले तपाईं एक सम्भावित संकटलाई विजयी रणनीतिमा बदल्नुहुन्छ। नम्र पाई खाउनुहोस् र माफी माग्नुहोस्। यदि ग्राहक अट्टेरी छ भने, यस्तो अवस्थामा उसलाई वा उनीसँग व्यक्तिगत दृष्टिकोण खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँको ग्राहकहरु तपाइँको कुरा सुन्नुहुन्छ, छुट प्रदान गर्नुहोस् वा तिनीहरुलाई राम्रो विश्वासका साथ उपहार दिनुहोस्।
From. अनुभवबाट सिक्नुहोस्
एक मात्र लगानीकर्ता र समय खपत गर्ने कार्यहरू मध्ये एक तपाईंले एक मात्र उद्यमीको रूपमा सामना गर्नु भनेको बजार अनुसन्धान हो। तपाईंको लागि भाग्यशाली, ग्राहक समीक्षा भेषमा एक आशीर्वाद हो। तिनीहरूले तपाइँको लागि आधा काम गर्छन्। राम्रो समीक्षाले तपाई ट्र्याकमा रहेको संकेत गर्दछ। एक नकारात्मक एक टोन सुधार गर्न चाहिन्छ औंल्याउँछ। उदाहरण को लागी, तपाईंको ढुवानी ग्राहकहरु सम्म पुग्न उमेर लाग्छ तब तपाईं अर्को शिपिंग कम्पनी संग काम विचार गर्नुपर्छ।
Argu. तर्कमा नजानुहोस्
यो गल्ती हो तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। तर्कमा प्रवेश समस्या समाधान गर्दैन। यसको सट्टामा, यसले आगोलाई इन्धन दिन्छ र तपाईंको ब्रान्डलाई नकारात्मक छवि दिन्छ।
Good. राम्रो समीक्षा कहिल्यै किन्नुहोस्
अनुहार मूल्य मा, राम्रो समीक्षा को लागी भुक्तान एक राम्रो विचार जस्तो लाग्न सक्छ। यद्यपि त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। संसारले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनेछ जब तपाइँले अन्डरहन्ड रणनीतिहरू प्रयोग गरिरहनुभएको थियो भनेर पत्ता लगाउँदा? त्यो तपाईंको व्यवसायको अन्त्य हुनेछ।
Yourself. प्रणालीसँग आफूलाई परिचित गर्नुहोस्
जान्नुहोस् कसरी Yelp, TripAdvisor र अन्य समीक्षा वेबसाइट काम गर्दछ। उनीहरूले खराब समीक्षा हटाउन एक सम्भावना प्रस्ताव गर्न सक्दछ यदि त्यसो गर्न राम्रो कारण छ भने। खराब पूनरावलोकनहरू ह्यान्डल गर्न सधैं तपाईंलाई हाजिरमा राख्दछ, तर यदि तपाईं यो प्रो जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको ब्राण्ड बढ्नेछ।